သငျသညျ Porn ပေါ်မှာချိတ်ခံရဖို့ Evolved - သင့်ရဲ့ ဦး နှောက် Porn ပေါ်မှာ
သငျသညျ Porn အပေါ်ချိတ်ဆက်ခံရဖို့ပြောင်းလဲ
ဤကဏ္inမှဆောင်းပါးများသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှု၏နောက်ကွယ်ရှိအခြေခံယန္တရားများကိုနားလည်ရန်ကူညီသည်။ သင်၏ ဦး နှောက်၏ပုံစံဒီဇိုင်းကအင်တာနက် porn ကိုလွယ်ကူစွာချိတ်ဆက်နိုင်အောင်လေ့လာပါ။ ငါဖတ်ရှုဖို့အကြံပြုလိုပါတယ် ပထမသုံးဆောင်းပါးများ အခြားဆောင်းပါးများသို့မဟုတ်ကဏ္ဍများမှပေါ်ရွေ့လျားမတိုင်မီအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။
အဘယ်ကြောင့်နေရမည်မဟုတ်ဂျော်နီစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Porn သူ Likes အကယ်. ?
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ဦးနှောက်ဟုန်းဟုန်းတွေကိုန်းကျင်နှင့်များမှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုးပန်းခြင်းနှင့်မိတ်လိုက်အပြုအမူတွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်မလိုချင်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များနားမလည်အဖြစ်မလှယျကူမယ့်အသုံးမပြုတဲ့ circuitry.Thereafter ကွာသုတ်သင်သမျှ arousal ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်တက် Wired ။
receptors binging အကြောင်းကိုသဲလွန်စထုတ်ဖေါ် dopamine နိုင်သလား?
ဤဆောင်းပါးသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဆောင်းပါးတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အခြေခံ furnishes, သင် porn riveting တွေ့ရှိရန်ပြောင်းလဲဘာဖြစ်လို့ရှင်းပြသည်။ ဒါဟာသင်လိင်ရှိသည်နှင့်အစာစားရမှတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲပေးသောဆုလာဘ် circuitry နှင့် dopamine, အကြောင်းသင့်သင်ပေးတယ်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း ပို. ပင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွများအတွက်ထုံပျော်မွေ့တုံ့ပြန်မှုများနှင့်မတရားသောမှဦးဆောင်အကျိုးကို circuitry Over-လှုံ့ဆော်နိုင်ပါတယ်။
porn, အသစ်အဆန်းများ, နှင့် Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှု
အဆိုပါ Coolidge Effect မရှိဘဲအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းရှိပါလိမ့်မယ်
အဆိုပါ Coolidge Effect မျိုးအောင်ခံရဖို့တောင်းစားသစ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ရှိပါတယ်လျှင်အော်ဂဇင်ပြီးနောက်သင့်ရဲ့နှေးကွေးရောငျ့ရဲနိူင်တယ်တဲ့ရှေးခေတ်ဇီဝအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာအာရုံကြောယန္တရားတစ်ခုစီကိုသစ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားဖြစ်နိုင်ခြေ-အပါအဝင်သင့် screen-အဖြစ်တန်ဖိုးရှိသောမျိုးရိုးဗီဇအခွင့်အလမ်းအပေါ်သူတို့အားရိပ် မိ. , သင်အစွမ်းထက် neurochemicals နှင့်အတူအရေးယူသို့ jolts ။
အဘယ်အရာကိုသူမသည် Mood အတွက်အမြဲတမ်းရှိခဲ့ပါလျှင်?
အဆိုပါ Coolidge Effect Trump ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးရည်ရွယ်ချက်များနိုင်
ဤဆောင်းပါးသည် Coolidge Effect ကိုရှင်းပြထားသည်။ ၎င်းသည်သားစဉ်မြေးဆက်တွင်မျိုးရိုးဗီဇအမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော ဦး နှောက်အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ အသစ်သောနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလိင်ဆက်ဆံဖက်များသို့ကူးပြောင်းရန်တိရိစ္ဆာန်များကိုတိုက်တွန်းသည်။ ဒီရှုထောင့်ကရှုထောင့်နှစ်ခုရှုထောင့်“ အိမ်ထောင်ဖက်” ဆီကနေပိုကြီးတဲ့အသံကိုရတဲ့အခါညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းကိုမောင်းနှင်သည်။
မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု
“ Evolutionary Review” ပညာရေးဂျာနယ်အတွက် Marnia နှင့်ငါရေးသားခဲ့သောဆောင်းပါး
လူ၏ရှေး ဦး နို့တိုက်သတ္တ ၀ ါများ၏ ဦး နှောက်နှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုမှုတိုက်ဆိုင်မှုသည်အလျင်မြန်ဆုံးရွေ့လျားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အင်တာနက်ကိုပြည်သူ့ထကျ သာ. ကောငျးသောအခါ,
ဆိုက်ဘာ erotica: pixels ကိုတစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တောငျ့သက်သာစေနိုင်ကြောင်းနိုင်သလား?
“ Dilbert ၏ဖန်တီးသူ” က အကယ်၍ လူတို့သည်“ ပိုမို၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာနှင့် ပို၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာများဆက်ဖြစ်နေမည်ဆိုပါက (လူသားမှဆိုက်ဘာဆက်ဆံသို့) ဒစ်ဂျစ်တယ် crossover သည်ဆယ်နှစ်မပြည့်မီကခန့်မှန်းထားသည်။
porn, အသစ်အဆန်းများနှင့် Coolidge Effect (2011)
အင်တာနက်ကိုပြည်သူ့ (2012) ထကျ သာ. ကောငျးသောအခါ,
အဘယ်ကြောင့်နေရမည်မဟုတ်ဂျော်နီစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Porn သူ Likes အကယ်. ? (2011)
အဘယ်အရာကိုသူမသည် Mood အတွက်အမြဲတမ်းရှိခဲ့ပါလျှင်? (2010)